Blog Blog oo ah "Tag" Dad Hindi ah - THE INDIAN FACE
Edurne Pasaban, taariikh nololeedkii boqoradda sideed kun
Edurne Pasaban, oo ah taariikh nololeed kooban oo ay leedahay boqoradda sideed kun Edurne Pasaban waa Toulouse oo dhalatay Ogosto 1, 1973, oo ah qof caan ku ah buuraha, waxaa taariikhda lagu xusi doonaa haweeneydii ugu horreysay ee fuulay 14 siddeed kun ee adduunka.
Lucía Martiño hirarkeedii ugu fiicnaa!
Rikoorka raadkiisa aan fiicnayn ee safiirkeena cusub ayaa gabi ahaanba naga dhigay cabsi! Mawjad, mawjad ka dib, mowjad ka dib, Lucía Martiño ayaa inbadan naga sii yaabisay iyada oo leh karti aad u baaxad weyn, edeb iyo ruux xor ah. Dhagsii oo waxbadan ka baro dhabbihii Asturian-kan geesinimada leh.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Lucía Martiño!
Sababahan oo dhan awgood, Lucía Marti ao waa #IndhiSpirit cad oo waxaan dhihi karnaa inay ku dhalatay inay ku dul wareegto (waxyaabo kale oo badan). Hore ma u taqaanay Asturian-ka? Ha ka waaban inaad sii waddo weydiinta iyada oo aad ogaato waxa himilooyinkeeda iyo guulaheeda soo socda ay ku yihiin adduunka mowjadaha!
Alex Txikon, taariikh nololeedka gaaban ee sahamiyaha
Soo hel taariikhda Alex Txikon, mid ka mid ah Himalayaska ugu fiican Spain iyo mid ka mid ah sahamiyayaashii ugu diyaarsanaa adduunka. Nagala soo qaybgal safarka nolosha buur-weynehan weyn ee Isbaanishka ah, oo soo ogow sida uu u maareeyo inuu gaaro heerka ugu sarreeya uguna adag adduunka.
Miguel Induráin Larraya, waa baaskiil wadida ugu badan Spain
Waxba kama fiicna inaad taariikhda u gasho sida ugu dilaacsanaanta ciyaaraha aad jeceshahay! Wax yar ka baro nolosha iyo xirfadda Miguel Induráin Larraya, oo soo ogow sababta uu uga mid yahay kuwa baaskiillada Isbaanishka loogu aqoonsan yahay.
Taariikh nololeedka Juan Menéndez Granados
Juan Menéndez Granados wuxuu cadeeyay inuu yahay dhiirigalin isboorti iyo is-hagaajin. Tan iyo markii uu is-hoosaysiiyay oo ku filan inuu aqbalo inuu ka baqay, ilaa uu ka adkaaday
Waxaan soo diyaarinay qaar ka mid ah halyeeyada isboorti ee ugu caansan adduunka oo la xasuusto .. Sii wad akhriska hana ku dhaafin sheekooyinkooda waa weyn!
Kilian Jornet Burgada: Taariikh nololeedka superman
Kilian Jornet waxay caan ku noqotay buuraha sanadihii dhawaa. Hamigiisa, awoodda isboortiga iyo taariikhda guusha ayaa ka dhigtay isaga inuu ku guuleysto orodka ugu wanaagsan adduunka iyo waliba astaan ​​qadarin leh.
Isagoo jira 58 sano, ayaa labo jeer ku guuleystay horyaalnimada adduunka, Carlos Sainz Cenamor, oo dhawaan la siiyay abaalmarinta Darawalka Wanaagsan ee WRC waxayna ku abaal mariyeen kuwa ugu muhiimsan 2020 Princess of Asturias Award Oo aan ka yarayn!
10-ka skater-ka ugu quruxda badan uguna hibada badan bogga Instagram
Gabdhaha Skater waxay si isdaba joog ah ugu biireen garoon barafka lagu ciyaaro ee kartidooda iyo xirfadooda wanaagsan. Laga soo bilaabo bilowgiisii ​​California (USA) 60-meeyadii, anshax marinta waxaa lagu diyaariyey jawi naadir ah. Laakiin hadda, sida isboorti kale oo badan oo xad dhaaf ah, habluhu waxay muujiyeen inay u qalmaan booskooda wanaagsan ee adduunka barafka. Kuwani waa gabdho karti leh oo naga wada yaabiya farsamadooda iyo xirfadooda, laakiin qofna nooguma sheegin inay u muuqan doonaan si qurux badan oo farsamooyinkooda ka samaynaya isbortiga!
Edurne Pasaban ayaa u dabaal dagaya sannadguuradii tobnaad ee ka soo wareegtay markii la qabsaday 14 sideed kun
Waxaa laga joogaa 10 sano markii aan maqalnay wararka oo dhan sida Edurne Pasaban waxay sheeganeysay guul taariikh taariikhi ah oo aan ka fileynin. Bishii Meey 2010, buuraha ugu sarreeya ee Isbaanishka ayaa si guul leh ku dhammaystiray mashruuceeda si ay ula wareegaan buuraha ugu sarreeya meeraha meeraha, sidaasna ay ku noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee hanata 14 sideed kun.
Michael Robinson: nabad galyo wanaagsan oo weyn
Boqortooyo Ingriis ah ma waxay u riyaaqday oo ku aqoonsatay Spain? Waxay u egtahay wax dhib badan, laakiin Michael Robinson ayaa suurta galiyay, iyadoo xariifnimo iyo nimco ay soo jiiteen dareenka dhamaan dadka jecel isboortiga isla markaana naga dhigay inaan dooneynno inaan maqalno inta badan doodahiisa waqtiga firaaqada ah oo ah luuqada Ingriiska ee loo yaqaan 'Spanishized'.
Waxaa jira kuwa isaga ku xusuusiya inta badan xirfadiisa shaqo joornaaliiste, iyo kuwa kale oo ku xasuusto yoolalka uu u dhaliyay gooldhaliyaha Preston North End, Manchester City, Liverpool ama CA Osasuna, iyo kuwa kaloo badan.
Waxaan wareysi ka qaadnay Samiira oo ka tirsan MHYV
En The Indian Face Waxaan jecel nahay inaan aragno sida dadku u raaxaystaan ​​nolosha oo kiiskan, waxaan u nimid inaan la kulanno Samira Salomé, oo hadda ah la shaqeeye ka shaqeeya @Radioset barnaamijka @partidoapartido, iyo ka qeybgale hore ee TV-Show MHYV Haweenka, ragga iyo ku xigeenada. Qof jecel nolosha inuu ku noolaado oo ku riyooday riyadiisa, baarashuud ku jooga Dubai.
Kolohe Andino: mid ka mid ah sawirrada ugu sawiran iyo lasocodka qalliinka
Laga soo bilaabo ul sidan oo kale ah: Kolohe Andino aabihiis waa Dino Andino qudhiisa, oo ah ASP WCT surfer. Iyada oo asal ahaan sidan oo kale maskaxda lagu hayo meeshii uu ku koray, San Clemente, oo ah barkad ballaadhan oo rajo-gelinno rajo leh (marka laga reebo inay tahay mid ka mid ah xarumaha dareemayaasha waaweyn ee adduunka oo dhan), maahan
Melania Suárez: waa yabooh aad u da ’yar oo ku saabsan hibada haweenka Isbaanishka
Ha weydiinin isaga heerka WCT ee wareega. Malaha waa wax yar ka hor. Waa wax iska caadi ah, adigoo aad u yar. Runtu waxay tahay inay tahay kaliya 11 sano jir, laakiin waa inaad kaliya aragtaa iyada si aad u aragto isku kalsoonaanta ay muujisay midna wuxuu bilaabayaa inuu fiiriyo mustaqbal aad u rajo badan oo ku saabsan dalxiiskan yar. Melania Suárez waa
Toni Medina: wadada isku-dhafka ah iyo skateriga barafka leh
Toni Medina waa 26 jir skateboarder ka soo jeeda Blanes, oo ah magaalo ku taallo Costa Brava, wuxuuna wade ka waday ilaa sagaal sano. Wuxuu jacayl u galay daawashada isboorti ee ay daawanayeen Powell Peralta iyo Kevin Harris iyo qaabka ay dareenkiisa u soo jiidatay wuxuu ahaa xariifnimo.
Kevin Pearce: Badbaadiyaha Barafka
Ka dib shil kaas oo lagu qasbay inuu miyir-belo, Kevin Pearce wuxuu bilaabay howl-gal nololeed cusub. Maanta waxaan wax yar kaaga sheegnaa fuushankii weynaa.
Lucas Eguibar, ku guuleysiga adduunka ee barafka ee qaabka xuduudaha
Lucas Eguibar, 21 jir reer Spain ah oo la yiraahdo Guipúzcoa, oo aan horay uga wada hadalnay isaga oo maqaal ku soo qoray barta internetka dhowr bilood ka hor, ayaa durbaba ah taariikhda barafka barafka lagu ciyaaro iyo isboortiga dalkeena.
Shaun White, waa mid ka mid ah barafka ugu fiican adduunka
Shaun Roger White, oo caan ku ah goobta baraf-barafka caalamiga ah sida Shaun White, wuxuu ku dhashay Sebtember 3, 1986 magaalada Carlsbad (San Diego), Kaliforniya, waa baraf-barafka barafka leh iyo barafka baraha bulshada waxaana labo jeer lagu dhawaaqay inuu ku guuleysto billadaha dahabka. Ciyaaraha Olombikada.
REMountain: wadiiqooyinka barafka iyo wariyaasha buuraha
Alberto Pantoja Dorda, Álvaro Pantoja Dorda iyo Luis Pantoja Trigueros ayaa dhisaya kooxda RecMountain. Farsamayaqaanka buurta, farsamo yaqaan sare xagga sawirka iyo ku takhasusay nivometeorology siday u kala horreeyaan.
Jan Farrell, orodka ugu dhaqsaha badan adduunka
Waxay awood u leedahay in ay xawaareyso 0 illaa 120 km / saac afartii ilbiriqsi oo keliya iyadoo la kaashanayo kabaha barafka ah ee ka badan 100% (45 more). Jan Farrell, orodka ugu dhaqsaha badan adduunka.
Yuki Kadono: rajada reer Japan ee barafka
Yuki Kadono oo fuushan Japan wuxuu bilaabay safarkiisa adduunka ee barafka barafka markii uu ahaa kaliya 8 sano jir wuxuuna ku hoos jiray kormeerkiisa aabihiis. Daqiiqadihii ugu horreeyay, Yuki wuxuu ku dheganaa anshaxa isboorti.
Russel Henshaw: hiwaayadda Australia ee kartida leh iyo kuwa aan la joojin karin
Australia micnaheedu maahan asal ahaan kuwa skaraatiyaasha heerka caalami ah, laakiin Russell Henshaw xaqiiqdi waa ka reeban tahay kiiskan. Russell wuxuu ku dhashay magaalada Sydney 1990-kii markii uu yaraa waxaa u cadaatay inuu baraf ka fariisanayo.
Chuck Patterson, oo ah kaaliyaha skis
Ma ogeyd Chuck Patterson? Waxaa caan ah sida qofka dulsaaran skis, waxaa mudan in lagu arko ficil. Xaqiiqdii waa xirfadle xirfadle ah sidoo kale khabiir ku xeel dheer sawirka, wuxuu caan ku yahay duubista fiidiyowyo ku tababaranaya isku-dhafka labada isboorti.
1 2 Xiga